ScanLife ဘားကုတ် & QR Reader Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ScanLife ဘားကုဒ် & QR Reader ကို
ScanLife ဘားကုဒ် & QR Reader ကို APK ကို
သင်အမြဲသငျသညျအမြားဆုံးချင်သောသတင်းအချက်အလက်များအရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် ScanLife နှင့်သင်၏အိတ်ကပ်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးစျေးဝယ်သူထားပါ။ မည်သည့်ထုတ်ကုန်ဘားကုဒ်ကို, QR Code ကိုသို့မဟုတ် Microsoft Tag ကိုစကင်ဖတ်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်လျင်မြန်စွာသငျသညျယခုစျေးနှုန်းများ, ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်ပင်သင်ဝယ်ယူမှုများအတွက်ဒေသခံစတိုးဆိုင်များများစာရင်းကိုမကယ်မလွှတ်အပါအဝင်ကအကြောင်းပိုမိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်!
သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအပေါ်နှငျ့သငျခစျြသို့မဟုတ်ချင်တဲ့ထုတ်ကုန်ထံမှ based ကိုပြောင်းလဲကြောင်းအမျိုးသားရေးနှင့်ဒေသခံစတိုးဆိုင်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထံမှနောက်ဆုံးပေါ်အထူးလျှော့စျေး, အပေးအယူနှင့်အထူးကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုရွေးချယ်ရေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါလိမ့်မယ်။
ထုတ်ကုန် UPC ဘားကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်, ငါတို့သည်သင်တို့သတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးကိုကူညီရှာဖွေပါလိမ့်မယ်:
- စျေးစစ်ဆေးခြင်းကို: ရှာဖွေနှိုင်းယှဉ်စျေးနှုန်းများအမေဇုံ, ကစားစရာ R ကို Us, Macy ရဲ့, Best Buy, Walmart, ပစ်မှတ်များကဲ့သို့သင်အကြိုက်ဆုံးစတိုးဆိုင်များမှ၎င်း, (တည်နေရာပေါ် မူတည်. ) သင့်ဖုန်းမှလက်ျာဘက်ဝယ်ယူရန်
- ဒေသခံစတိုးဆိုင်များမှမြေပုံ: သင်ထုတ်ကုန်ယ်ယူနိုင်ပါသည်ရှိရာဒေသခံစတိုးဆိုင်များများစာရင်းကိုလက်ခံရရှိ
- သုံးသပ်ချက်များ: အဘယ်အရာကိုအခြားသူတွေထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပြောနေကြသည်ကိုဖတ်ရှု
- အနှစ်သက်ဆုံးသိမ်းဆည်းရန်သင့်သမိုင်းနှင့်တူသောထုတ်ကုန်အားလုံးကိုသင့်ရဲ့စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လှုပ်ရှားမှု Save
- ခွင့်ပြုချက်ပေါ်ရှိမှတ်စုများ -
ကျနော်တို့အလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့ privacy ကိုယူ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အခြို့သောခွင့်ပြုချက်တောင်းအဘယ်ကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ခွင့်ပြုချက်အများစုဟာသည်သင်ရွေးချယ်ပါကအဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုကဲ့သို့သင်၏ကိရိယာဖို့အတွက် QR Code ကိုအကြောင်းအရာမကယ်မလွှတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုဖို့ရှိပါတယ်။
ဒီ app သင်တစ်ဦးဘားကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးနောက်အကြောင်းအရာများပြသနိုင်ဖို့အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်။
"ACCESS WIFI STATE နှင့် Access NETWORK_STATE":
ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်ရရှိနိုင်ပါလျှင်ဒီ app စစ်ဆေးပေးတယ်။
ဒီ app ဘားကုဒ်များ scan မှကင်မရာကိုအသုံးပြုသည်။
ဒါဟာအပေးအယူများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများအဘို့သည် Periodic တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာများပေးပို့ဖို့အသုံးပြုသည်။ သငျသညျအသိပေးချက်များအောက်တွင် app ကို setting များကိုကနေဒီကို disable နိုင်ပါတယ်။
scan, စကင်နာ, QR Code ကို, qrcode, ဆုလာဘ်, ဘားကုဒ်ကို, scancode, UPC, စျေးနှုန်းများ, စျေးနှုန်းစစ်ဆေးမှုများ, datamatrix, သုံးသပ်ချက်များ, အပေးအယူ, ကူပွန်, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ScanLife ဘားကုဒ် & QR Reader ကို
21.96 ကို MB
Scanbuy, Inc မှ
ShopSavvy - ...
10 အကောင်းဆုံးဘားကုဒ် ...